ओलीले मोदीलाई पठाएको "विन्ती पत्र" सार्वजनिक भएपछी माओवादीमा हंगाम!
नेपाल पाना प्रकाशित: २०७४-१०-१८ गते | 86931 पटक हेरिएको
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बन्ने अन्तिम तयारीमा रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका गतिविधिले धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ ।
बैंककमा उपचार गरेर फर्किएका ओलीले भारतसँग निकै निकटता देखाएका छन् । भारतीय दूतावासभित्रको कार्यक्रममा सहभागी नभएका ओली अर्को दिन त्यस्तै प्रकारको अर्को कार्यक्रममा सहभागी भए । भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीसँग बसेर सांस्कृतिक कार्यक्रम हेरेर ताली बजाए । त्यति मात्रै होइन ओलीले आफू भारतसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको पत्र समेत नरेन्द्र मोदीलाई पठाएको सार्वजनिक भएको छ ।
भारतको विरोध गरेको देखाउने ओलीले मोदीलाई पठाएको पत्रले तरङ्ग उत्पन्न गरिदिएको छ । पत्रमा ओलीले मोदीको प्रशंसा गरेका छन् । भारतसँगको सहकार्यसँग मात्रै नेपालको विकास हुने उनको भनाइ छ । वाम गठबन्धनले सरकार बनाउने तयारी गरिरहेका बेला ओलीले भारतप्रति किन यसरी मोह देखाएका हुन् कसैले बुझेका छैनन् । एमालेका एक नेताले भने,‘केपी ओलीको राष्ट्रवादप्रति हामीलाई सबै कुरा थाहा छ ।
बैंककमा उपचार गरेर फर्किएपछि भारतप्रति नरम देखिनुभएको छ ।’ ती नेताले भारतकै चाहनामा वाम गठबन्धन बनेको बताए । ओलीकै आग्रहमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज मोदीको विशेष दूत बनेर दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै छिन् । त्यस क्रममा स्वराजले ओली लगायत अन्य नेताहरूसँग राजनीतिक भेटवार्ता गर्नेछिन् ।
भारतले ओली र एमालेलाई किन यसरी महत्व दिएको हो भनेर माओवादी केन्द्रका नेताहरू समेत सशंकित बनेका छन् ।
विदेशबाट हतियार किन्नेबारे विप्लवले विज्ञप्ती निकालेर गरे यस्तो खुलासा !
ओलीले अमेरिकामा उल्टो आइडी कार्ड भिरेपछि सन्नटा!
सुदूरपश्चिममा फेरि बल्यो आगो, प्रदेश सभाकै आँगनमा यसकारण जलाइयो टायर
अमेरिकामा आेलीले माआेवादीलाई सशस्त्र हतियारधारी समूह भनेपछि...
क्याम्पस प्रमुखको मनोमानीविरुद्ध नेविसंघ, गरियो तोडफोड र आगजनी
संसदमा गृहमन्त्री : पुँजीवादले महिलालाई 'माल' बनायो
सूचनामन्त्री गोकुल बास्कोटाको चर्चा कमाउने दाउ, १० लाख पोर्न साईटमध्ये ४५ मात्रै बन्द
वाह ओलीजी ! भारतीय आतंकवादीलाई सहिद घोषणा, नेपाली चेली निर्मलालाई अन्याय, किन ?
काठमाडौं । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको घटनाको दुई महिना वित्दासम्म दोषी पत्ता लगाउन नसकेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुनसरीका खुर्सिद अन्स..
नेकपाको कमिटिः गणेशमान पुनमाथि ब्रेक दबाइयो, यी नेताको सिकार बन्दा अटेनन् सुचिमा !
काठमाडौं । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सातै प्रदेशका इन्चार्ज अध्यक्ष तथा सह-इन्चार्ज तोकेको छ । तर, नेकपाको प्रदेश ५ मा भने वर्तमान उर्जामन्त्री बर्षमान पुन 'अ..
संविधान दिवसकै दिन पूर्वराजा शाहको सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति, बैंककबाट गरे यस्तो खुलासा !
काठमाडौं । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफु राजा बन्ने र नेपाललाई पुनः हिन्दु राज्य स्थापना गर्ने बताएका छन् । निजी भ्रमणको क्रममा थाईल्याण्डको बैंककमा रहेका शाहले बैंककमा नेप..
घेराबन्दीमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री, टुडिँखेलमा प्रधानमन्त्रीले खै उपेन्द्र जी भनेपछि...
काठमाडाैं । सरकारले देशैभरका सरकारी कार्यालयमा संविधान दिवसको आयोजना गरेर भव्य डंगले मनाउन आग्रह गरेको थियो । सोहि अनुरुप सातै प्रदेशमा संविधान दिवस आ-आफ्नै तरिकाले मनाइय..
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दोश्रो दर्जाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' निराशाजनक अवस्थामा चार दिने चीन भ्रमण सकेर आज राति स्वदेश फर्किन लागेका छन..
इपीजी विरुद्ध मधेसमा राजपा महासचिव झाको चाखलाग्दो दाैडधुप, चिनियाँ राजदुतको भुमिकामा कैफियत !
काठमाडाैं । चिनियाँ राजदुत यु होङ्ले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका महासचिव राजीव झा मार्फत नेपालमा विभिन्न संस्था खोलेर नेपाल-भारत सम्बन्धलाई तहसनहस बना..
सिक्नुस्ः प्रम आेलीलाई अमेरिकामा हाम्रै राजदुतले विमानस्थलमा स्वागत गरे, ट्रम्प नेपाल आए के होला ?
काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आेली अहिले अमेरिकामा छन् । जम्बो टिम लिएर अमेरिका पुगेका राष्ट्र प्रमुख संयुक्त राष्ट्र..
निजगढ विमानस्थलबारे संसदमा व्यङग्यः रुख काट्ने हो, कांग्रेसको चुनाव चिन्ह होइन !
काठमाडौं । निजगढ अन्तर्राष्टिय विमानस्थलको निर्माणका सम्बन्धमा सांसदहरुले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले निजगढ विमानस्थल..
चिनियाँ राजदुत मार्फत आेली र ज्ञावालीले यसरी तुहाइ दिए राष्ट्रपति सी संग प्रचण्डको भेटवार्ता !
काठमाडाैं । भारत भ्रमणबाट हाैसिएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दोश्रो दर्जाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' चीन भ्रमणबाट हतोत्साहित भएर स्वदेश फर्किए । ..